एउटा एस्तो भिडियो जुन राता रातभाईरल बन्यो , खिच्ने मान्छेलाई पनि लागेन विश्वास , के छ त्यस्तो यो भिडियोमा ? - Babal Khabar
November 15, 2021 by बबाल खबर
सामाजिक सञ्जालमा कहिले के भाइरल हुन्छ थाहा हुन्न । यस्तै अहिले भेडाहरुको चर्चा छ, जुन भाइरल भै रहेको छ ।
इजरायलका लिअर पटेलले ड्रोनबाट खिचेको भेडाको बथानको भिडियो भाइरल भएको छ ।
उक्त टाइम ल्याप्स भिडियोलाई फेसबुकमा लाखौं पटक हेरिएको छ । दक्षिण इजरायलको पिस भ्याली योकनियामको फार्ममा रहेका भेडाको बथानको भिडियो खिचिएको हो ।
इजरायलको हैफामा बस्दै आएका पटेल प्रोफेस्नल हवाई फोटोग्राफर हुन् । सामान्यता ड्रोन चलाएर वर्षभरि निजी काम गर्ने पटेललाई अहिले विश्वभरबाट अन्तर्वार्ता र अन्य काम गर्नका लागि इमेल आइरहेको छ । बीबीसी भिडियो हेर्नुस,
Prevश्रीमानको गलामा फित्ता बाँधेर यसरी श्रीमतीले घुमाइरहेकी थिइन् कारण थाहा पाउदा सबै छक्क !
nextसारङ्गी बजाउँदै जोगीको भेषमा २२ वर्षपछि श्रीमान् भिख माग्न घरमै आइपुगे, विधवा बनेर बसेकी श्रीमतीको होस उड्यो